अबौं पैसा कहाँबाट आउछ महाधिवेशनमा दलहरुले खर्च गर्ने ?
यतिबेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई महाधिवेशनको चटारो छ । निकै तामझामका साथ राजनीतिक दलहरु अधिवेशन गर्दै महाधिवेशन सफल पार्न लागिरहेका छन् ।
बिहिबार, मंसिर २, २०७८ १:३०
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। यतिबेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई महाधिवेशनको चटारो छ । निकै तामझामका साथ राजनीतिक दलहरु अधिवेशन गर्दै महाधिवेशन सफल पार्न लागिरहेका छन् । निकै तडकभडक र तामझामका साथ करोडौँ खर्च गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत राजनीतिक दलहरुमा एकाएक कसरी प्राप्त हुन्छ ? राजनीतिक दलहरुको खर्चको स्रोत के त ? ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***